Home News Diyaarad Dagaal oo Dhuusamareeb ka degtay iyo Villa Soomaalia oo damacsan Qorshe...
Diyaarad Dagaal oo Dhuusamareeb ka degtay iyo Villa Soomaalia oo damacsan Qorshe halis ah
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb maanta geysay ciidamo ka tirsan Xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad.
Wararka la helayo ayaa sheegaa in goordhow magaalada Dhuusamareeb ay ka degtay diyaarad siday Ciidamo katirsan kuwa dowladda,kuwaasi qeyb ka noqonaya boqolaal askari oo la geeyay caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug.
Ciidamadaan ayaa sida aan wararka ku helnay waxaa ay gaarayaan ilaa 50 askari,kuwaas oo laga qaaday Magaalada Muqdisho,isla markaana lagu xoojinayo Amniga Magaalada dhuusamareeb oo maalmahaan xiisad ka taagneyd.
Warark ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in geynta Ciidamada horleh dowladda Soomaaliya ee Magaalada Dhuusamareeb Maanta halkaasi laga dareemay,waxana la sheegay in Ciidamada la geynayo Xarumaha Maamulka ee Dhuusamareeb.
Si kastaba Ciidamada horleh oo ay Maanta geysay Dowladda Soomaaliya Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Maalmahaan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay ka taagneyd xiisad u dhaxeysay Dowladda Soomaaliya iyo Ahlusunna,wallow Ciidamada Dowladda ay la wareegeen deegaano ay horay ugu sugnaayeen Ciidamada Ahlusunna.